जाडोमा जोर्नीको दुखाइ किन बढ्छ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
जाडोमा जोर्नीको दुखाइ किन बढ्छ?
२०७६, ४ पुष शुक्रबार १४:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौं : अस्वस्थ्य व्यक्तिहरु गर्मीभन्दा जाडो मौसममा बढी प्रभावित हुनेगर्छन्। जाडो बढेसँगै कतिपयको जोर्नीको दुखाइ पनि बढ्न सुरु हुन्छ।चिसोको पारोसँगै दुखाइ पनि बढ्ने भएपछि बिरामीलाई चिसो समय नआइदिए जस्तो लाग्छ।
चिकित्सककाअनुसार बाहिरी तापमानमा उचावचढाव आएसँगै त्यसले मानिसको शरीरमा सिधै असर गर्छ। तापमानमा कमी आएका कारण जोर्नीहरूको नसा संकुचन हुन्छ र त्यस भागमा रगतको तापक्रम घट्छ। जसका कारण जोर्नीहरू कडा र पीडादायी हुन्छन्। चिकित्सका अनुसार केही सावधानी अपनाएर यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
चिकित्सकका अनुसार चिसो मौसममा हाम्रो मुटुको वरिपरि रगतको तापमान कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ। तापमान सही नभए यसले शरीरका अन्य भागमा रगतको आपूर्ति घटाइदिन्छ। जब छाला चिसो हुन्छ तब दुखाइको असर बढी महसुस हुन्छ। वैज्ञानिक भाषामा यसलाई ‘आर्थराइटिस’ भनिन्छ।
गठिया ‘आर्थराइटिस’ ले सामान्यतया 40 वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई प्रभाव पार्छ। यो समस्याबाट विशेषगरी महिला बढी प्रभावित हुनेगर्छन्। सम्पूर्ण शरीरको भार घुँडामा पर्ने भएकाले गठियाको समस्या उत्पन्न हुने गरेको हो।चिकित्सकका अनुसार गठियाको समस्याले जोर्नीका साथसाथै अन्य अंगमा पनि असर गर्छ।
उमेर बित्दै जाँदा हड्डीबाट क्याल्सियम र अन्य खनिज पदार्थ आपूर्तिमा कमी हुँदै जान्छ। हड्डीहरू एकआपसबाट छुटिन जान्छन्। जब हामी बूढाबूढी हुन्छौं तब लुब्रन्टले जोर्नीको बीचमा रहेको लचिलो र चिल्लो पदार्थ सुक्दै जान्छ। स्नायुको लम्बाइ र लचिलोपन पनि घट्छ। जसका कारण जोर्नीहरुमा दुखाइ बढ्छ।
पौष्टिक खानेकुरा खाएर जोर्नीहरूलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ। नियमित आसन वा योग गरेमा यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।गिद्धासन र प्राणायामले जोर्नीको दुखाईमा सहयोग गर्छन्। एउटै कुर्सीमा र कम्प्युटरको अगाडि घण्टौं बस्दा यो समस्याले सताउन सक्छ।
त्यसैले जोर्नीहरुलाई स्वस्थ्य राख्न लामो समय एउटै आसनमा बस्नु हुँदैन। सन्तुलित खाना खाने, नियमित हिंड्ने र केही समय व्यायाम गर्दा जोर्नीहरू बलियो राख्न सकिन्छ। व्यायाम र योग गर्नुअघि एकपटक विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ।
कार्यालयमा लामो समयसम्म एउटै सिटमा बस्नु हुँदैन। हरेक आधा घण्टा वा एक घण्टाको फरकमा हिँडडुल गर्नुपर्छ। महिलाले अग्लो हिल जुत्ता लगाउनु हुँदैन। हिल जुत्ता लगाउँदा कम्मरको साथै घुडा र जोर्नोको दुखाइ बढाउँछ।
ह्याम्स हस्पिटलमा बालबालिकाको बाथ र क्लिनिकल इम्युनोलोजीसम्बन्धि अत्याधुनिक सेवा
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । काठमाडौंको धुम्बराही चोकस्थित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ह्याम्स हस्पिटलमा बालबालिकाको बाथ रोग र क्लिनिकल
के हो ओस्टियो अर्थाइटिस ?
शरीरका जोर्नीहरूमा रहने कुरकुरे हाड खिइनुलाई ओस्टियो अर्थाइटिस भनिन्छ । सामान्य भाषामा यसलाई हड्डी खिइनु
शरीरमा प्रोटिनको मात्रा बढी भएमा युरिक एसिड बढ्ने गर्छ । तसर्थ खानपानमा विशेष ध्यान पु-याउनुपर्छ